သင်ဆန်စက်လုပ်ငန်းစတင်ရန်စိတ်ကူးရှိကောင်းရှိမည်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကဆန်စက်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအတွက်သင်ငွေရှာဖို့ပဲ. မည်သည့်စီမံကိန်းကို၌ရှိသကဲ့သို့, ဆန်စက်စက်ရုံစီမံကိန်းတည်ဆောက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်. အပြင်စွမ်းရည်ကနေ, နည်းပညာ၏အဆင့်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်, အလိုအလျောက် / Non- အလိုအလျောက်, ကုန်ကြမ်း, ဝန်ထမ်းများငှားရမ်းထားသည်, ထုပ်ပိုး, နှင့်များစွာသောအခြားကုန်ကျစရိတ်သြဇာလွှမ်းမိုး.
ဤအချက်သည်မှန်ကန်သောဆန်စက်စက်ရုံစီမံကိန်းကိုသင်တည်ထောင်လိုပါကဘတ်ဂျက်ကိုစဉ်းစားသင့်သည့်အချက်ဖြစ်သည်. သင်၏ဘတ်ဂျက်အပေါ် မူတည်၍ သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုစီစဉ်သင့်သည်. သင့်မှာအတော်အတန်အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်ရှိရင်, သငျသညျအညီစက်ယန္တရားဝယ်ဖို့စီစဉ်ထားရပါမည်. ဘတ်ဂျက်သည်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်,
ပြီးတာနဲ့သင်ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, သင်၏ဆန်စက်လုပ်ငန်းအတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးစက်များကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်မည့်နေရာများကိုရှာဖွေသင့်သည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိရောက်သောဆန်စက်စက်မရှိဘဲ, သငျသညျအချိန်ကြာကြာကာလအဘို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေး၏ဤအပိုင်းကိုအစတွင်ဂရုစိုက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. သငျသညျအပေါငျးတို့သဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်များစဉ်းစားကြပြီးနောက်, နောက်ဆုံးသင်ဆန်စက်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာတွင်ထားနိုင်သည်.
Victor Rice MILL သည်ပြည့်စုံသောအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်,မြင့်မားသောစွမ်းရည်, စွမ်းအင်ထိရောက်သောပြီးပြည့်စုံသောဆန်စက်စက်ရုံ - စပါးကိုစားသုံးခြင်းမှအိတ်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအထိဖြစ်သည်။ စပါးအစာကျွေးခြင်းအပါအ ၀ င်, စပါးသန့်ရှင်းရေး, စပါး / ဆန်သယ်ဆောင်, ဖျက်ဆီးခြင်း, စိုင်းထီးဆိုင်, စပါးခွဲထုတ်, Whitening / polishing, ငယ်ငယ်ကတည်းက, ပိုလန်,အရောင်ခွဲခြင်း, ထုပ်ပိုး / အိတ်များစသည်တို့.
VICTOR Rice MILL ၏ဆန်စက်ပြည့်စက်ရုံသည်အသုံးပြုသူများကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်အကျိုးပြုနိုင်သည်:
2.စီမံကိန်းအရည်အသွေးကိုသေချာအောင်လုပ်ခြင်း,တစ် ဦး ချင်းစီစက်အရည်အသွေးအပါအဝငျ.
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीItaliano日本語한국어PortuguêsEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu